नेपालमा सेकेन्ड ह्याण्ड मोबाइलको बजार फस्टाउदै | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← भएका छन् (गजल)
प्रतीक्षा.. !! →
बजार प्रतिस्पर्धासँगै मोबाइल कम्पनीहरूले सस्तो मूल्यमा विभिन्न डिजाइन र फङ्सन भएका मोबाइल निकाल्ने र मोबाइल किन्ने क्रम बढेपछि सेकेन्ड ह्याण्डका मोबाइलको बिक्री बढेको हो । त्यहीअनुरूप विद्यार्थी, जग्गादलाल, कर्मचारीलगायत अन्य व्यक्तिहरू नयाँ मोबाइलका लागि पुरानो मोबाइल बेच्न थालेपछि सेकेण्ड ह्याण्ड मोबाइल पसल फस्टाएको व्यापारीहरू बताउँछन् ।
‘प्रायः विद्यार्थी, जग्गादलाल र कर्मचारीहरूले मोबाइल बेच्न आउने गर्छन्’, चक्रपथस्थित कृष्ण इलेक्ट्रोनिक्स बिक्री तथा मर्मत केन्द्रका सञ्चालक, कृष्ण श्रेष्ठले भने, ‘पुरानो मोबाइल उचित मूल्यमा बेचेर नयाँ सेट पनि सस्तोमा नै पाइने भएकाले मोबाइल बेच्न आउनेको सङ्ख्या धेरै नै हुन्छ ।’
सामान्य वर्गका व्यक्तिहरूले नयाँनयाँ डिजाइनका मोबाइल चलाउन पैसा हुँदैन, त्यस वर्गका लागि पसलले धेरै सहयोग गरेको श्रेष्ठले बताए ।
उनले मासिक ३०–४० वटासम्म सेकेन्ड ह्याण्ड मोबाइल सेट एक हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्ममा बेच्ने गरेको बताउँदै उक्त मोबाइल सेटमा ६० महिनासम्म वारेन्टी दिएर बेच्ने गरेको जनाए ।
यसैगरी न्यूरोडस्थित ओम मोबाइल सेन्टर (सेल्स एन्ड इक्सचेन्ज) का धनेश्वरी मैनालीको भनाइ पनि उस्तै छ, पैसा नभएका व्यक्तिहरूले सस्तोमा मोबाइल सेट खोज्न आउने गरेका उनले बताए ।
उनका अनुसार मासिक ८० वटासम्म सेकेन्ड ह्यान्ड मोबाइल सेट बेच्ने गरिएको छ । मैनालीले बेचेको मोबाइल एक हप्तासम्म वारेन्टी दिने गरेको बताए । प्रायः विद्यार्थी तथा अन्य वर्गका व्यक्तिहरूले मोबाइल बेच्न आउने गरेकाले खरिद गर्दा वारेन्टी कार्ड तथा किनेको बिल ल्याएमा मात्र लिने गरेको उनले जनाए ।
राजधानीको न्युरोड, चाबहिल, बागबजार, चक्रपथलगायत क्षेत्रमा सेकेण्ड ह्यान्ड सेटको मुख्य व्यापार गर्ने क्षेत्र मानिन्छ । सस्तो मूल्यमा राम्रो कम्पनी र राम्रो सेटहरू छानीछानी किन्न पाएकाले आफु सेकेण्ड ह्याण्ड मोबाइल सेटतर्फ आकर्षित भई किन्न आएको गोँगबूका कविन अधिकारी बताउँछन् ।
आफ्नो मोबाइल पसलमा पुरानो मोबाइल इक्सचेन्जको समेत सुविधा भएकाले व्यापार राम्रो रहेको न्युरोडस्थित सीटीभी मोबाइल सर्भिसका नारायण चाम्ले बताउँछन् । आफ्नो मोबाइल सेन्टरबाट मासिक २ सय ५० वटासम्म सेट बिक्री हुने गरेको उनले बताए ।
सेकेन्ड ह्याण्ड मोबाइलको बजार फस्टाउँदै गएकाले हाल राजधानीमा मात्र लगभग १ सयवटा पसल रहेको व्यापारीको भनाइ छ ।
हाल बजारमा नोकिया, सोनी इरिक्सन, सामसुङ, मोटोरोला, भोडा फोन, एलजीलगायत सेकेन्ड ह्याण्ड मोबाइल सेट पाइन्छ ।